मैले सबै संरचना बनाएपछि कुलमान आएर जस पाए : मुकेशराज काफ्ले – Namaste Dainik
मैले सबै संरचना बनाएपछि कुलमान आएर जस पाए : मुकेशराज काफ्ले
August 27, 2020 NamastedainikLeaveaComment on मैले सबै संरचना बनाएपछि कुलमान आएर जस पाए : मुकेशराज काफ्ले
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भनेर कुलमान घिसिङलाई श्रेय दिन नमिल्ने बताएका छन् । बुधबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने मैले सबै संरचना बनाएपछि कुलमान आएर जस पाए, कसरी मिल्छ ?
तपाई जत्तिको एउटा यत्रो बरिष्ठ पत्रकारले यो चाकडीको भाषा बोल्न छोड्नुहोस न । तथ्यमा जानुहोस, अध्ययन गर्नुहोस ।कुलमानजी मान्छे राम्रो हुनुहोला । कसैको सक्षमताको बारेमा मैले किन प्रश्न उठाउने ? तर, तपाईले जसरी व्याख्या गरिरहनुभएको छ, मान्छे हेर्नुहोस कहिल्यै भगवान हुन सक्दैन् ।
जनताले आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । सक्षम हुनुहुन्छ । जनताको अभिमत नै निर्णायक हो भनेर रहेन । यो सोसल मिडिया भनेको प्रायोजित हो ।बनाएपछि कुलमान आएर जस पाए, कसरी मिल्छ ?
जनताले आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । सक्षम हुनुहुन्छ । जनताको अभिमत नै निर्णायक हो भनेर रहेन । यो सोसल मिडिया भनेको प्रायोजित हो ।
प्रधानमन्त्री को गुनासो:- पहिलेः नक्सा किन जारी गरिनस् ? अहिलेः किन छलफल गरिनस्।